လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ကြမယ့် သူရဲကောင်းတွေ အတွက် ဘုရားသခင်ထံတွင် ဆုတောင်းပေးနေ တဲ့ အဆိုတော် ကောင်းကောင်း – GaMone Media
Homepage / Celebrity / လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ကြမယ့် သူရဲကောင်းတွေ အတွက် ဘုရားသခင်ထံတွင် ဆုတောင်းပေးနေ တဲ့ အဆိုတော် ကောင်းကောင်း
လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ကြမယ့် သူရဲကောင်းတွေ အတွက် ဘုရားသခင်ထံတွင် ဆုတောင်းပေးနေ တဲ့ အဆိုတော် ကောင်းကောင်း
အဆိုတော်ကောင်းကောင်း ကတော့ အသံအေးအေးလေးနဲ့ သီချင်းလေးတွေ ကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားသီဆိုသူ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် သိမ်းပိုက် ရရှိထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေ မှာလည်း ဂီတမောင်နှမများနဲ့အတူ တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်း ပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ် အတွက် ကျရာအခန်း ကဏ္ဍကနေ ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လမ်းပေါ်ထွက်ကာ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်း ခွန်အားဖြည့်သီချင်းတွေနဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေကာ တစ်တပ် တစ်အား ပါဝင်ပေးနေတာပါ။ ကောင်းကောင်းရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကိုလည်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ဝေမျှပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကလည်း ကောင်းကောင်းရဲ့ Facebook အကောင့်တွင် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ကြမယ့်သူရဲကောင်းတွေအတွက်ဘုရားသခင်ထံတွင် ဆုတောင်းပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူကလည်း ” ညီအစ်ကို မောင်နှမ များခင်ဗျာ👍 မနက်ဖြန်ဟာ အရေးကြီးတဲ့ နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်…. အကောင်းဆုံး ပေးဆပ်ကြရအောင်နော်😍 ကျွန်တော်ကတော့ မနက်ဖြန်ကြရင် ပါဝင်ကြမည့်– ခရစ်ယာန်ဖြစ်စေ,ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စေ,ဟိန္ဒူ-မွတ်စလင်ဖြစ်စေ❤️ နိုင်ငံရဲ့ အရေးတော် ပုံမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ ပါဝင်ကြမည့် အားလုံးသော သူရဲကောင်းများ အတွက်💪 (အစာရှောင်)ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါ့မှ အသနားခံ မည် ဖြစ်သောကြောင့် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်များ အားလုံးအနေဖြင့် ဖြစ်စေလိုသော ဆုတောင်းချက် တစ်ယောက်တစ်ခု တင်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျ👍🙏 လူ၌ဖြစ်တတ်တဲ့ လောဘ,ဒေါသ,မောဟ များ မေ့ထားပြီး နှိမ့်ချစွာဆုတောင်းခြင်းဖြင့် မနက်ဖြန်မှာ ပေးဆပ်ချင်ပါတယ်👍 မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအပေါ် ဘုရားသခင်ငြိမ်သက် ဝမ်းမြှောက်ခြင်း ပေးပါစေ🙏(အာမင်)” ဆိုပြီးရေးသားထားတာလည်း ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ အတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့် ပြန်လည်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။မြန်မာနိုင်ငံကြီး အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်နော်။
အဆိုေတာ္ေကာင္းေကာင္း ကေတာ့ အသံေအးေအးေလးနဲ႔ သီခ်င္းေလးေတြ ကို ကိုယ္တိုင္ေရးသားသီဆိုသူ တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈေတြကို ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ သိမ္းပိုက္ ရရွိထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူထု လႈပ္ရွားမႈေတြ မွာလည္း ဂီတေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔အတူ တက္တက္ႂကြႂကြပူးေပါင္း ပါဝင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းျပည္နဲ႔လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ အတြက္ က်ရာအခန္း က႑ကေန ပါဝင္အားျဖည့္ကူညီေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လမ္းေပၚထြက္ကာ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ေနတဲ့ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ခြန္အားျဖည့္သီခ်င္းေတြနဲ႔ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖကာ တစ္တပ္ တစ္အား ပါဝင္ေပးေနတာပါ။ ေကာင္းေကာင္းရဲ႕ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈေတြတိုင္းကိုလည္း သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ေဝမွ်ေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔ညကလည္း ေကာင္းေကာင္းရဲ႕ Facebook အေကာင့္တြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ၾကမယ့္သူရဲေကာင္းေတြအတြက္ဘုရားသခင္ထံတြင္ ဆုေတာင္းေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူကလည္း ” ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ မ်ားခင္ဗ်ာ👍 မနက္ျဖန္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ေန႔ျဖစ္တဲ့အတြက္…. အေကာင္းဆုံး ေပးဆပ္ၾကရေအာင္ေနာ္😍 ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မနက္ျဖန္ၾကရင္ ပါဝင္ၾကမည့္– ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေစ,ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေစ,ဟိႏၵဴ-မြတ္စလင္ျဖစ္ေစ❤️ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးေတာ္ ပုံမွာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွာ ပါဝင္ၾကမည့္ အားလုံးေသာ သူရဲေကာင္းမ်ား အတြက္💪 (အစာေရွာင္)ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါ့မွ အသနားခံ မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္မ်ား အားလုံးအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစလိုေသာ ဆုေတာင္းခ်က္ တစ္ေယာက္တစ္ခု တင္ေပးလို႔ရပါတယ္ဗ်👍🙏 လူ၌ျဖစ္တတ္တဲ့ ေလာဘ,ေဒါသ,ေမာဟ မ်ား ေမ့ထားၿပီး ႏွိမ့္ခ်စြာဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ မနက္ျဖန္မွာ ေပးဆပ္ခ်င္ပါတယ္👍 ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံးအေပၚ ဘုရားသခင္ၿငိမ္သက္ ဝမ္းေျမႇာက္ျခင္း ေပးပါေစ🙏(အာမင္)” ဆိုၿပီးေရးသားထားတာလည္း ျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ဒီသတင္းေလးကို တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး အျမန္ဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။
Previous post သရဏဂုံ တင်ထားပြီး ပြီ မို့ မနက်ဖြန် အတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်မည် လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အလင်းရောင်
Next post ပြည်သူလူထု ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အတွက် အဖွဲ့သားတွေ ကို အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်းတွေ သင်ပြပေးပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဝေဠုကျော်